Dr. Fahad Cabdisalaan: Darmuuska shaaha kee kansar laga qaadaa? (dhegayso) – Radio Daljir
Seteembar 19, 2018 6:25 g 0
Maalmihii u dambeeyey baraha bulshada waxaa ku jirtay arrin ku saabsan istimaalka tarmuusyada qaarkood oo la sheegayo in ay ku jirto maaddo sababta xanuunka kansarka iyo caafimaad-darro.
Waxaa la tilmaamayaa in tarmuusyada qaarkood laga helo oo ay ku jirto maadada loo yaqaan Asbestoos oo ku jirta inta u dhexaysa labada dhalo ee tarmuusyada, waxaana la sheegay in waddamada qaarkood ay horey u mamnuuceen noocaas.
Dr. Fahad Cabdisalaan Maxmuud Indhayare oo oo jooga Buurtinle oo wareysi siiyey Radio Daljir ayaa sharaxaya maaddadan iyo saamaynta dhanka caafimaadka ay ku yeelan karto iyo talooyinka uu bulshada u jeedinayo.
Waxa uu u warramay Jamaal Faarax Adan, Daljir Gaalkacyo.
Koonsilka Degmada Caabudwaaq oo laga horyimid (dhegayso)